I-Funky Nest-Indlu entle eZipari - I-Airbnb
I-Funky Nest-Indlu entle eZipari
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJani
Indawo yanamhlanje enemeko yomoya, kumgangatho wokuqala wendlu yosapho, ilungele izibini kunye neendwendwe ezithanda ukuhlola isiqithi saseKos kunye neziqithi ezingqongileyo.Ikwidolophana yaseZipari iikhilomitha ezimbini ukusuka elunxwemeni kwaye imizuzu emithathu uhamba ngebhasi. Ukubuka iindawo zasemaphandleni kunye nelanga elininzi, kuquka indawo yegadi apho unokuphumla khona. Ikhitshi elincinci elinento yonke negumbi lokuhlambela labucala elilungiswe ngo-2022, elinomatshini wokuhlamba impahla olahlwayo.
Imeko yomoya, i-WIFI yasimahla kunye neTV yescreen esicaba kunye neNetflix yasimahla kunye noqhagamshelo lwe-Usb ziyafumaneka. Umatshini wokucoca ikofu, i-microwave, itoaster, ibhoyila yamanzi, ifriji, umatshini wokuhlamba, umatshini wokomisa iinwele, i-iron, zonke zibandakanyiwe.
Ubumelwane buzolile, ngakumbi ebusuku, kwaye emini zininzi iindawo zokutya, indawo yokwenza umthambo, iivenkile ezithengisa ukutya, iikhemesti, iivenkile zekofu, ii-ATM, iindawo zokulungisa iinwele, zonke zikude.
Umbuki zindwendwe ngu- Jani
I like travelling and meeting new people whille discovering different cultures.
Ndingumntu wasekhaya ndihlala ndonwabile ukukubonisa kwaye ndikuncede ngayo nantoni na onokuyidinga :)
Inombolo yomthetho: 00001519292
Iilwimi: English, Suomi, Ελληνικά